मेयरको दादागिरी : ३० हजार क्षति हुदाँ ३० लाख क्षतिपुर्ति लिदैं
सरकारले बिर्तामोड नगरपालिकाका मेयर ध्रुवकुमार सिवाकोटीलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने नाममा आर्थिक दुरुपयोग गरेको छ । स्थानीयको आन्दोलनका क्रममा १० कात्तिक ०७४ मा घर र सवारीसाधनमा भएको क्षति नगरपालिका र बिमाबाट पूर्ति गरिसकेका मेयरलाई २० र २३ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट ३० लाख दिएको हो । साथीको घरमा खेल्न गएका अर्जुनधारा–११ का बालक लक्ष्मण सिवाकोटी नजिकैको पोखरीमा मृत भेटिएपछि हत्याको आरोपमा स्थानीय आन्दोलित भएका थिए । आन्दोलनकै क्रममा प्रहरीको गोली लागेर अर्जुनधारा–५ का ३२ वर्षीय नरेश थापाको पनि मृत्यु भएको थियो ।
घटनाले गम्भीर मोड लिँदासमेत मौन बसेको भन्दै १० कात्तिकको विरोध -मालीमा स्थानीयले मेयरको शनिश्चरेस्थित साढे दुई तले घरमा ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए । त्यसक्रममा केही झ्यालका सिसा फुटेका थिए भने नगरपालिकाबाट लिएको मे.१झ १२१ नम्बरको गाडीमा र बा.१०च ३०६१ नम्बरको निजी कारमा सामान्य क्षति पुगेको थियो । उनको छोरा नेपाल रत्न सिवाकोटीको मे.७प ३००० नम्बरको बुलेट मोटरसाइकल भने आन्दोलनकारीले जलाइदिएका थिए ।
मेयर सिवाकोटीले घटनाको केही समयपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत एक करोड चार लाखबराबरको क्षतिको विवरण बनाएर सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग गरेका थिए । नातिको एउटा खेलौना गाडीको क्षतिपूर्ति मूल्य मात्रै २४ हजार माग गरेका थिए । झापाका तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमप्रसाद तिवारीले करिब एक करोड उपलब्ध गराउनुपर्ने फाइल गत वर्ष प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले पनि गत वर्ष नै फाइल प्राप्त भएको जनाएको छ । ‘गत वर्षदेखि नै फाइल रोकिएर बसेको थियो,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यति वेला जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाबाट फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आएको हो ।’
अहिले नगरपालिकाको गाडी नगरपालिकाकै खर्चमा, निजी कार इन्स्योरेन्स रकमबाट मर्मत गरिसकेका र घरको सिसा फेरेर भित्तामा रङ रोगन पनि गरेका सिवाकोटीलाई सरकारले ३० लाख के आधारमा दियो भन्ने प्रश्न उठेको छ । बिर्तामोडका नेकपाकै कार्यकर्ताले समेत आपत्ति जनाएका छन् । तत्कालीन एमालेबाट मेयर निर्वाचित सिवाकोटी प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिन्छन् । बिर्तामोड आउँदा प्रधानमन्त्री धेरैजसो उनकै घरमा बस्छन् । सिवाकोटी बिर्तामोडका प्रतिष्ठित व्यवसायी एवं नर्सिङ कलेजका सञ्चालकसमेत हुन् ।
‘क्याबिनेटले निर्णय गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गर्ने हो,’ अर्थका प्रवक्ता खत्रीले भने, ‘रकम निकासा भइसकेको छ कि छैन भन्ने थाहा पाउन अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइट हेर्दा हुन्छ ।’सिवाकोटीबाहेक रामेछापकी विमला विश्वकर्मा, स्याङ्जाकी पवित्रा भण्डारी र मोरङका गोविन्दराम गौतमलाई पाँच–पाँच लाख, नेपालगन्जका कमलसिंह क्षेत्रीलाई एक लाख, अछामका हिमाल विकलाई आठ लाख र काठमाडौँ महानगरपालिका–३ वसुन्धराका रोहण गुरुङलाई ३० लाख दिएको छ । गुरुङ वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष हुन् ।
‘मेयरसाबले यसरी सहायता लिनु बिलकुल गलत हो । बिर्तामोड घटनाका वेला उहाँ जनताको पक्षमा बोल्न नसक्दा घरमा तोडफोड भयो । तोडफोड हुनु अपराध हो । तर, मेयरसाबले सानातिना कुरा सहनुपर्छ । आर्थिक सम्पन्नता भएका मेयरले घरको दुई–चार वटा सिसा फुट्दैमा ३० लाख सहायता लिनु जनताको नजरमा गिर्नु हो ।
नगरपालिकाको बोलेर गाडी – ३१ लाख
घरपछाडिको सुटिङ रुमको क्षति – दुई लाख ५० हजार
स्रोत : इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोड
मेयर भन्छन्, ‘बिमा कम्पनीले थोरै पैसा दिन्छु भन्यो, त्यसैले दिमाग खराब भएकाले लिइनँ’डेढ वर्षअघि भिडले तपाईँको घरमा तोडफोड गर्दा भएको क्षतिमा सरकारले ३० लाख क्षतिपूर्ति दिने भएछ, रकम लिनुभयो ?
मैले त आज मात्रै यो कुरा सुन्दै छु । पैसा अहिलेसम्म पाएको छैन । सरकारले गरेको निर्णय मलाई थाहा छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत क्षतिको मूल्याङ्कन सरकारकहाँ पुगेको होला ।
कति क्षति भएको थियो त्यतिखेर तपाईँको घरमा ?
घर पुरै तहसनहस गरेका थिए । तीन वर्षअघि ४५ लाखमा किनेको सुजीकी कम्पनीको मे.१च २६१ नम्बरको कार पुरै तोडफोड गरे । छोराले चढ्ने बुलेट बाइक आगो लगाइदिए । सबै गरेर एक करोडभन्दा बढीको क्षति पुग्यो भनेर त्यतिखेर इलाका प्रहरी कार्यालयमा निवेदन हालेको थिएँ । पछि जिल्ला प्रशासनले ७०–८० लाखजतिको क्षति मूल्याङ्कन गरेको थियो ।
तर, त्यतिखेरको तस्बिर हेर्दा त तपाईँको घरको झ्याल र ढोकाका सिसा मात्र फुटेको देखिन्छ नि त ?
कसरी सिसा मात्रै फुटेको हुन्छ ? ७०–८० जना घरभित्र पसेर चार घन्टेसम्म तोडफोड गरे, घरभित्रका सामान ल्याएर बाहिर फाले । ठुलो क्षति पु-याम ।
बिमाले त मर्मत गर्न आवश्यक खर्चको मूल्याङ्कन गर्ने हो, पुरै गाडीको दिने होइन नि ?
तर, मेयरकै छोरा नेपाल रत्न भन्छन् ‘गाडीको क्षतिमा बिमाको पैसा लियौँ, बरु मोटरसाइकलको बिमा दाबी नै गरिएन’
दुई वटै गाडी बनायौँ । नगरपालिकाको गाडी नगरपालिकाले नै मर्मत ग-यो । हाम्रो गाडीको इन्स्योरेन्स पनि थियो, आफैँ बनायौँ । तर, मोटरसाइकलचाहिँ धेरै नै जलेकाले नबन्ने भयो, ग्यारेजमै थन्किएको छ । इन्स्योरेन्स त मोटरसाइकलको पनि थियो, तर क्लेम गरेको छैन । मोटरसाइकल मेरो नाममा थियो भने गाडी आमाको नाममा ।
यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट लिइएको हो ।